Noho ny asan’izy ireo…: nankahery ny Holafy fahefatra Vonjy Voina ny MDN - ewa.mg
News - Noho ny asan’izy ireo…: nankahery ny Holafy fahefatra Vonjy Voina ny MDN
Isan’ireo Holafy misahana
andraikitra goavana amin’ny fanaovana vonjy voina ny Holafy
fahefatra Vonjy Voina na ny 4UPC Toamasina. Nametrahan’ny fanjakana
fitokisana izy ireo manoloana ny asa notanterahin’izy ireo, toy ny
famonjena olona tany Maroantsetra sy Mahanoro ary ny tao Mahajamba
ny taona 2020. Nankahery ity holafy ity amin’izany asa izany ny
minisitry ny Fiarovam-pirenena (MDN) nandritra ny fandalovany tao
Toamasina sy nampahafantatra ny lehiben’ny Etamazaoron’ireo Tafika,
ny Jly Sahivelo Delphin tamin’ny Holafy. Manan-danja ny 4UPC noho
izy misahana mivantana ny fiarovana ny vahoaka manoloana ireo
ambana marolafy toy ny tondra-drano, ny rivodoza, ny afo ary
tamin’ity fiparitahan’ny valanaretina Covid-19 ity. “Mankahery
anareo hatrany amin’ny fiatrehana ny adidy napetraky ny fanjakana
aminareo amin’ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany”, hoy ny
MDN. Nitohy tamin’ny fitsidihana ny tobin’ny Rezimanta faharoan’ny
Jenia Miaramila, misahana ny asa fanorenana ao Toamasina ny
dian’ireto manamboninahitra ireto. Tao amin’ny Toby Jly Jonah
Joseph ny nisy ny fankaherezany ireo miaramila manaraka fiofanana
mialoha ny handraisan’izy ireo ny asany amin’ny fampandriana
fahalemana sy vonjy voina amin’ny loza voajanahary.
L’article Noho ny asan’izy ireo…: nankahery ny Holafy fahefatra Vonjy Voina ny MDN a été récupéré chez Newsmada.
Nivoaka tamin'ny : 26/08/2021
Miandry an’i Marc Ravalomanana ho lany filoham-pirenena ireo mponin’i Toliara sy Fandriana omaly, nandritra ny fampielezan-kevitra nataon’ ny kandidà laharana faha-25. Nilaza ireo mponina, fa “tsy misy afa-tsy Ravalomanana Marc sisa no hany mpitondra antenaina hitondra fampandrosoana ho an’i Madagasikara”. Manoloana ny fiavian’i Ravalomanana Marc tany Toliara io, dia maro ireo mponina tonga nitsena azy, ary efa tomefy olona ihany koa ny kianja hikabarian’i Marc Ravalomanana. Nambaran’i Marc Ravalomanana tamin’ ny mponina tao Toliara, fa “ efa maro ireo asa natao hitsinjovana ny faritra Atsimon’ ny Nosy, ary miampy izany ny ao anatin’ ny manifesto” hoy izy. Hapetraka ihany koa ny fandriam-pahalemana ahafahan’ny mponina miompy, satria ny fisian’ ny fandriam-pahalemana dia fanoitra iray tsy ahafahana mampandroso, hoy hatrany i Marc Ravalomanana. Noho izany dia hapetraka ny paikady atao amin’ ny asan-dahalo, ka omena ny fitaovana sahaza azy ireo mpitandro filaminana amin’izany. Heniky ny hafaliana tanteraka ireo mponin’i Toliara naheno ny fanomezan-toky avy amin’ i Marc Ravalomanana, ka hifidy azy amin’ ny faha-19 ny volana desambra izao Toraka izany ihany koa ny tao Fandriana, izay tonga maro manoloana ny fiavian’ ny kandidà Marc Ravalomanana, namangy sy niresaka tamin’ izy ireo. Nanome toky ireo mponina noho izany ny kandidà laharana faha-25, fa hitsinjo ireo tantsaha any an-toerana. Eo ireo mpamboly izay efa mahalala tsara ny fomba fiasan’i Marc Ravalomanana raha fambolena no resahina, eo ihany koa ireo mpanao asa tanana, izay mila tohanana amin’ ny fahaiza-manaon’izy ireo. Ezaka lehibe hoy i Marc Ravalomanana ny fanatsarana ny fiainan’ny mponina, izay ahitam-bokany zato andro aorian’ny nandraisany ny fitondrana. Tsapa tamin’ny fiavian’ ireo olona maro nanotrona ny filoha Ravalomanana tonga tany an-toerana, fa mangetaheta fampandrosoana izy ireo. Noho izany, mba ahatongavana haingana amin’ izay hetaheta izay hoy ny kandidà Marc Ravalomanana, dia hofidina ary harotsaka ny vaton’ny kandidà laharana faha-25. Tsy hahadinoin’ny kandidà rahateo ny nanentana ireo mpifidy, sy nampianatra azy ireo ny fomba fifidianana amin’ ny faha-19 ny volana desambra. Iratra Raitra L’article Fandriana, Fianarantsoa ary Toliara : Miandrandra an-dRavalomanana ho filoha est apparu en premier sur .L’article Fandriana, Fianarantsoa ary Toliara : Miandrandra an-dRavalomanana ho filoha a été récupéré chez Triatra.
Kabarin’ny Filoham-pirenena: mikatona avokoa ny toeram-polanonana, karaoke, fandihizana…
Tsy azo ihodivirana intsony fa efa tena mihanaka dia mihanaka ny valanaretina coronavirus, anisan’izany ilay “variant” avy any Afrika Atsimo, izay tena mahery sy mandavo haingana. Namoaka fepetra ny filoham-pirenena, Rajoelina. Nitafa mivantana tamin’ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena tamin’ny alalan’ny haino amanjery, ny asabotsy 4 avrily lasa teo, tamin’ny 8 ora sy sasany alina mahakasika ireo fepetra sy toromarika maro samihafa, tafiditra tao anatin’izany ihany koa ny tontolon’ny kolontsaina. Nambarany fa mikatona avokoa ireo toeram-pilanonana sy ny fanaovana karaoke, ny toeram-pandihizana manomboka izao. Izany dia hisorohana amin’ny fifampikasohana mivantana izay mety hiteraka fihanahana haingana ny valanaretina covid-19. “ Tsy manana tongotra ka afaka mandehandeha ny tsimokaretina fa ny olona no mitondra azy”, hoy ny filoham-pirenena Rajoelina, nandritra ny fampitana mivantana ny toromarika hiadiana amin’ny valanaretina covid-19 tao amin’ny fahitalavitra malagasy, TVM. Nasiany teny ihany koa ireo toerana fisakafoana ny amin’ny fandrindrana ny toerana, izay noferana ho amin’ny antsasany ihany ho fanajana ny fihetsika ara-pahasalamana. Nambarany, teo am-piandohana fa mila miady amin’ny fahavalo tsy hita maso isika, ao anatin’izany ny paikady samihafa sy ny fepetra ara-pahasalamana. Mitaky fitandremana sy fahamailoana hatrany ho an’ny tsirairay mba tsy hiverenana amin’ny fihibohana, raha ny filazany. Samy manao karaoke sy mandihindihy any an-tranony avy izany aloha ireo efa zatra manalazy rehefa faran’ny herinandro sy ny sisa, manomboka izao. Tao anatin’ny 30 andro, nitombo be ny lavon’ity valanaretina coronavirus ity ka mila mitandrina sy manaja ireo fepetra ara-pahasalamana isan-karazany.NarilalaL’article Kabarin’ny Filoham-pirenena: mikatona avokoa ny toeram-polanonana, karaoke, fandihizana… a été récupéré chez Newsmada.
Fantanterahana ny fanadinana: tsy ampy ny laza adina bakalorea tao Toamasina
Misedra fahasahiranana ny mpikirakira ny fanadinana bakalorea ho an’ny faritanin’i Toamasina raha ny angom-baovao natao.Olana ny tsy fahampian’ny laza adina na betsaka aza ny mpiadina tsy tonga nanatrika ny fanadinam-panjakana farany amin’ity taom-pianarana ity. Niseho izany tranga izany ho an’ny foibem-panadianana eto an-tampon-tanànan’ i Toamasina sy any amin’ny tapany atsimon’i Toamasina. Voalaza fa tsy ampy ny laza adina tany amin’ny distrikan’ i Soanierana Ivongo, araka ny fanazavana azo.Nandritra ny andro voalohany teo, tsy ampy ny laza adina ho an’ny taranja filozofia ho an’ny sokajy C etsy amin’ny foibem-panadinana lisea Jaques Rabemananjara. Voatery manao dikamitovy ny mpiandraikitra ny fiobem-panadinana. Toy izany avokoa ny tolakandro ny zava-misy teo amin’ny taranja alemà sy ny matematika.Alefa mailaka ny laza adinaNoho ireo rehetra ireo, mampanahy ny mety hisian’ny laza adina hivoaka mialoha, indrindra raha ny zava-misy amin’ireny distrika sasantsany ireny. Raha ny angom-baovao, halefa “mail” ny laza adina any amin’ny distrika manodidina an’i Toamasina. Raisina eny amin’ny “cyber” izany satria vitsy ny distrika manana fitaovan-tserasera ahafahana mandray izany tsy hisy tomika. Ankoatra izay, fantatra fa nanaterana “imprimante” ahafahana manao dikamitovy ireo laza adina ny eny anivon’ny disitrika misy foibem-panadinana.369 ireo tsy tonga amin’ny ivontoeram-panadinana 55Nahatratra 369 ireo tsy tonga amin’ny ivontoeram-panadinana miisa 55 amin’ny 90 manerana ny faritanin’i Toamasina. Ankizy 12 taona ny zandriny, sokajy D, mpianatra avy ao Maroantsetra. 57 taona ny zokiny, avy amin’ny sokajy C, mpiadina avy ao Soanierana Ivongo kosa izy. 23 976 ny mpiadina bakalorea, nahitana fidinana hatramin’ny 2 000, raha ny fanazavana nataon’ny filohan’ny oniversite, ny profesora Zafitody Conscient. Mitsinjara toy izao ireo mpiadina raha isaky ny sokajy. Sokajy A1: miisa 1 209; sokajy A2, mahatratra 15 442. Ny sokajy C, misy mpiadina 372 ary ny sokajy D, manana mpiadina 5 541. Ho an’ny mpiadina amin’ny sampana teknika 1 417 izy ireo eto Toamasina.SajoL’article Fantanterahana ny fanadinana: tsy ampy ny laza adina bakalorea tao Toamasina a été récupéré chez Newsmada.
Motostore Show: nahasarika sy nahaliana olona maro ny seho
Fahombiazana ny andiany voalohany amin’ny «motostore show», andiany voalohany. Fifaninanana sy fampisehoana moto, nokarakarain’ny motostore, natao teny amin’ny CCI Ivato, ny asabotsy sy ny alahady lasa teo. Nahaliana ny rehetra ny seho satria nahitana fampisehoam-pahaizana sy fifaninanana tsy mbola fahita. Tsy toy ny mahazatra mantsy ny fizotrany fa mihodina amin’ny toerana misy sakana samihafa, toy ny fitsambikinana amin’ny vatan-kazo, ny fandehanana eny ambony vato sy ny sisa.Ankoatra izay, hisy ihany koa ny fifaninanana ho an’ny “motocross”, izay nizotra ao anaty ala, amin’ny lalana mirefy 1, 900 km eo ho eo. Mifanintsana, ireo mpandray anjara rehetra eo amin’ny andro voalohany ka miatrika ny famaranana lehibe, ireo 10 manana fe-potoana tsara indrindra na ny “Top 10”, ny alahady.Nisy ihany koa tao anatin’ity “motostore show” ity, ny tranoheva, hanehoan’ireo mpanjifa moto, ireo fitaovana mahakasika ny moto sy ny pitsompitsony. Nisy koa ny toerana natokana ho an’ireo kliobana moto miisa 12, taorian’ny famakivakiana ny tanàna.Misy sokajiny ny fifaninanana, dia ny an’ireo zazavao sy ny an’ireo efa matihanina.Nomena sehatra ihany koa ireo ankizy satria nisy ny toerana natokana ho azy ireo, nahafahany nilalao sy nanao fifaninanana, tamin’ny alalan’ny solosaina. TorcelinL’article Motostore Show: nahasarika sy nahaliana olona maro ny seho a été récupéré chez Newsmada.
Fahamaizana :: Kilan’ny afo ny trano lehibe iray misy rihana
Niredareda ny afo teny Anosizato, omaly antoandro. Nirehitra ny trano lehibe misy rihana iray. Ny efitra tao ambony rihana no voalaza fa kilan’ny afo tanteraka. Nisy avotra kosa ny efitra vitsivitsy tao ambany rihana. Nieren-doza ny trano nifanila taminy. Tsy nisy ihany koa ny olona tra-doza, naratra na namoy ny ainy. Voafehy sy maty tanteraka ny afo, minitra vitsy taorian’ ny fahatongavan’ny sampana mpamonjy voina. Tombanana ho afo nateraky ny fifampikasohan’ny herinaratra no nahatonga ny loza. Nalaky niitatra ny firehetana noho ny hamafin’ny fitsokan’ny rivotra. Voalaza fa tsy tao an-toe­rana ny tompon-trano, tamin’io fotoana io. Fivarotana enta-madinika kosa ny teo ambany nanoloana an’ilay trano lehibe saingy tsy voakitiky ny afo. “Vao hitanay ny setroka nivoaka tao amin’ilay trano dia niantso mpamonjy voina avy hatrany izahay. Mandra-pahatonga azy ireo anefa dia efa niezaka nandray andrai­kitra ireo fokonolona teo amin’ny manodidina tamin’ ny famonoana ny afo sy famoahana ny entana tamin’ireo trano sasany”, araka ny fanazavana nataon’ ireo mponina teny an-toerana. L’article Fahamaizana :: Kilan’ny afo ny trano lehibe iray misy rihana est apparu en premier sur AoRaha.
Anjaran’ny faritra Amoron’i Mania indray no nandray ny atrikasam-paritra mikasika ny tetikasa Fanjarian-tsakafo sy Fahasalamana ifotony na Fafi, omaly izay natao tao Ambositra. Nahatratra 124 ireo mpizaika izay nahitana ny ben’ny tanàna rehetra, ny lehiben’ny CSB ary ny fikambanana hiantsehatra eny anivon’ny kaominina sy fokontany. Kaominina miisa iraika amby enimpolo ao amin’ity faritra no hiasana mandritra ny dimy taona voalohany. Raha tsiahivina, mitana ny laharana fahefatra maneran-tany amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka i Madagasikara ary misy fiantraikany mivantana amin’ny fianakaviana sy ny fiarahamonina ary ny fampandrosoana ny firenena izany. L’article Tetikasa Fafi est apparu en premier sur AoRaha.
Malagasy 213 avy any ivelany namonjy ny havany : tsy notakina ilay taratasy fanamarinana fa nahavita PCR
Iray amin’ny Malagasy tsy tafody fa tafajanona tany ivelan’i Madagasikara i Mamitiana, tovolahy iray namita asa tany Kongo ary tavela tany nandritra ny efa-bolana rehefa nikatona ny sisin-tany teto amintsika noho ny hamehana. Fihi­bohana tanteraka koa no niainany tany an-toerana nandritra ny fotoana maharitra. Ny toeram-pivarotana lehibe sy ny banky ihany no mahazo miasa. 13 ny Malagasy niara-niainga taminy tany hody aty Madaga­sikara niaraka amin’ny Ethio­pian Airlines. Tsy maintsy nanao fitiliana PCR avokoa izy 13 ary nahazo taratasy manokana milaza fa salama ary tsy mitondra ny tsimokaretina Covid-19. Ireo mpandeha ma­lagasy sasany avy amin’ny firenena hafa anefa, tsy nanao PCR akory nefa fiaramanidina iray ny nitondra azy 213 ho aty Madagasikara. Tsy notakina rahateo io taratasy nanaovana PCR io rehefa niondrana ny mpandeha. 1 500 dolara ny saran’ny tapakila na avy aiza na avy aiza firenena niaingan’ilay Malagasy hamonjy fo­diana. 67 izy ireo ny nahiboka teny amin’ny Villa Verte Am­ba­tomirahavy nandritra ny 14 andro. Mianto-tena amin’ny hofan’ny efitrano sy ny sakafo satria fepetra efa nekena mialoha ny hodiana izay. Mandalo isaky ny roa andro ny ekipan’ny minisiteran’ny Fahasala­mana manara-maso ny fivoa­ran’ny toe-pahasalaman’izy ireo. Ny alahady teo, nisy TDR natao ho an’ireo vonona fa tsy voatery kosa ny fanatanterahana azy fa an-tsitrapo. Nihiba avokoa ny valin’ny fitiliana. Nody omaly izy ireo rehefa tapitra ny14 andro nihibohana ka azon’ny fiaran’ny fianakaviana nalaina teny an-toerana. Nanomana fiara kosa ny CCO ho an’ireo 56 ho any amin’ny faritra ivelan’Anta­na­narivo. Nampitaraina ny olona ny saran-dalana satria 300 000 Ar ny vola notakina ho an’ireo ho any amin’ny RN7 rehetra. Nisy ireo nisafidy ny hijanona amin’ny havana eto Antana­narivo aloha noho ny tsy fa­hampian’ny saran-dalana.Vonjy A.L’article Malagasy 213 avy any ivelany namonjy ny havany : tsy notakina ilay taratasy fanamarinana fa nahavita PCR a été récupéré chez Newsmada.